Ny serivisy - Shijiazhuang Jipeng Import sy Export Co., Ltd.
1. Niorina tamin'ny 1998, ny orinasantsika dia manana tantara lava, izay ny vola miasa dia mihoatra ny 20 tapitrisa dolara amerikana. Nanana entana feno za-draharaha izahay mba hanompoana ny mpanjifa vahiny, anisan'izany ny mpikarakara ny tetikasa manokana mba handinika ireo antsipirihany momba ny vokatra, hitana ireo antontan-taratasy sns .. Azontsika atao ny manome ireo vokatra tsy vita ihany, fa afaka koa ny OEM izay manonta ny marika na marika mpanjifa vahiny. ihany koa dia afaka manao vokatra isan-karazany na manipy ampahany araka ny sarin-tsain'ny mpanjifa na ny santionany.
2. Ireo mpanjifa dia afaka mankafy entana mora kokoa sy mahomby eto, ny iray amin'ireo tombotsoantsika dia ny manangona entana isan-karazany ho ao anaty boaty feno iray, ny mpanjifa sasany aza dia mila entana mihoatra ny 5 amin'ny fotoana iray. Ho mora kokoa amin'ny mpanjifantsika kokoa izany.
3. Ny fifehezantsika kalitao dia serivisy sarobidy iray ho an'ny mpanjifantsika.During ny famokarana na alohan'ny fandefasana, ny fanaraha-maso ny kalitao dia hidina any amin'ny orinasa mba hanafainganana ny fandefasana sy hanamarina ny tatitra momba ny kalitao sy ny voasoratra. Ny lahatsoratra tsy lavorary dia holavin'ny fanaraha-maso kalitao, hangataka ny mpanamboatra izahay hamerina na hanatsara ny kalitao mandra-pahamendrika azy ireo hihaona amin'ny mpanjifan'ny mpanjifa vahiny.